अर्थ/बजार बुधबार, असार ३, २०७७
नेपालमा लोडशेडिङ शुरु भएपछि लिन थालिएको उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थासँगको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकले महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विद्युत नियमन आयोगको यही १ असारको निर्णयले सबै प्रकारका डेडिकेटेड र टंक लाइनको महशुल अब सामान्य ग्राहक सरह भएको विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले बताए।
उनका अनुसार यही असार महीनाको विलको पैसा साउनमा तिर्दा ग्राहकले घटेको शुल्क तिर्ने छन् । विद्युत नियमन आयोगले ५ एम्पियरको विद्युत मिटर राखेका र मासिक १० युनिटमात्र प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम डिमाण्ड शुल्क रु. ३० तिरे हुने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णयपछि मासिक १० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकले मासिक जम्मा रु. ३० तिर्दा पुग्छ।
यो शुल्क बिजुलीको शुल्क नभएर डिमाण्ड शुल्क मात्रै भएको धितालले बताए । सरकारले १० युनिटसम्मका विद्युत प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क गरेकोले यस्ता प्रयोगकर्ताले अब डिमाण्ड शुल्क मात्र तिरे पुग्ने नियमन आयोगले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि घरायसी ग्राहकले प्रयोग गर्ने एम्पियरको आधारमा न्यूनतम शुल्क तय भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क खारेज भएपछि भने व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकको खर्च ६० प्रतिशतसम्म कम हुने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै सामान्य ग्राहकभन्दा बढी शुल्क लिएर लोडशेडिङका बेला निरन्तर बिजुली दिने दिने व्यवस्था डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहलाई गरेको थियो।
लोडशेडिङ हटेसँगै यो व्यवस्था खारेज गर्न माग व्यावसायीले गरेका थिए । असार अगाडि प्रयोग भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क बिल अनुसार नै तिर्नुपर्ने र साउनमा तिर्ने असारको पैसामा भने अतिरिक्त शुल्क कसैले पनि तिर्नुपर्ने तथा सबै प्रकारका ग्राहक समान भएको नियमन आयोगले जानकारी दिएको छ।
आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ महसुल दर साबिकको भन्दा समग्रमा १० प्रतिशत कम भएको उल्लेख छ । आयोगका अनुसार सहरी वर्गका ग्राहक तथा इन्डक्सन चुल्हो बाल्ने ग्राहक, विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने, सामुदायिक र सिंचाइका ग्राहकलाई दृष्टिगत गरेर नयाँ महशुल शुल्क तय भएको पनि उल्लेख छ।